Bacda loo yaqaan 'Drawstring bag' midabka dabiiciga ah ee suufka maran ee jeebka jeebka hal abuurka ah ee waraaqda daabacan ayaa daabacan kara logo Soo saaraha iyo Badeecada Zhihongda
Bacda istiraatiijiga ee midabka dabiiciga ah suufka jeex jeex jeebka hal abuurka ah ee jeebka xirmada ah ayaa daabacan kara astaanta
5. DIY FASHILIYADA, BUXDA HADIYADDA HADIYADA, IYO XUSUUSTA XISBIGA - Ka shaqaynta mashruuc cusub oo DIY ah? Boorsooyinkan adiga ayaa loogu talagalay adiga! Waad rinjiyeyn kartaa tan ama qaabka oo aad u qurxin kartaa qaab kasta oo aad rabto. Kuwani sidoo kale waxay u fiican yihiin xaflad ama xaflad aroos ama sida boorsooyin hadiyadeed oo la jeclaan karo. Sii hadiyado ahaan maalmaha dhalashada, Kirismaska ​​iyo ciidaha kale. Kuwaani waa boorsooyinka kaliya ee aad waligaa ugu baahan doontid mashruucaaga farshaxanka iyo farsamada.
Magaca Shayga Bacda istiraatiijiga ee midabka dabiiciga ah suufka jeex jeex jeebka hal abuurka ah ee jeebka xirmada ah ayaa daabacan kara astaanta
Hore: Bacda Qurxinta Eco-Friendly-ka Suugaanta Hadiyadda ah ee Sawirka Sawirka Qurxinta Qurxinta
Xiga: Bacda dhalada ah ee dharka suufka ah oo tayo sare leh oo Shaqsi ahaaneed
Midab saafiga ah Cotton shiraac kubado Bag Gusset Thi ...
Custom cudbi shakhsi tayo sare leh suuf ...
Naqshadeynta naqshadeynta dharka suuf dabiici ah oo culus ...
Logo caadadii jumlada xayaysiis beige c ...
Qiimaha warshad Black Cotton canvas drawstring ba ...